Dhugaa dubbannee bakka dhihe bulla: Ergamtoonni Wayyaanee caasaa ABOs tahee kan mootummaa ODP keessatti hiriiranii akka dubbiin gara nagaatti hin deemne godhaa jiru – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosDhugaa dubbannee bakka dhihe bulla: Ergamtoonni Wayyaanee caasaa ABOs tahee kan mootummaa ODP keessatti hiriiranii akka dubbiin gara nagaatti hin deemne godhaa jiru
Dhugaa dubbannee bakka dhihe bulla: Ergamtoonni Wayyaanee caasaa ABOs tahee kan mootummaa ODP keessatti hiriiranii akka dubbiin gara nagaatti hin deemne godhaa jiru
Dhugaa dubbannee bakka dhihe bulla:Ergamtoonni Wayyaanee caasaa ABOs tahee kan mootummaa ODP keessatti hiriiranii akka dubbiin gara nagaatti hin deemne godhaa jiru
Dhugaa dubbannee bakka dhihe bulla. Yaya Beshir
Ergamtoonni Wayyaanee caasaa ABOs tahee kan mootummaa ODP keessatti hiriiranii akka dubbiin gara nagaatti hin deemne godhaa jiru. Gurmuu lamaanuu keessa rakkootu jira. Waan inni tokko balleessu inni kaan nan sirreessaatti badii irratti badii dabalaa deemaa jiru. Gochaan qaamota lamaan gidduutti mul’ataa jiru kan wal mormu haa fakkaatu malee, Oromoo diiguu irratti daboo waliif bahaa jira. ABOn qawwee hidhatee yoo rakkoo ittiin uumu mootummaan ODPiis gochaa kanan dhaabsisaadhaan waraana bobbaasee ummata nagaa ajjeesa. Gochaan kun lamaanuu fedhii ummata Oromoo miti. Fedhii dhaabota maqaa Oromoo dhahatan kana lamaaniitis jedhamee hin eegamu ture. Xiiqiin yoo daangaa dabre obboleessa ofiitti nama diinomsee fedhii diinaaf nama hojjechiisa. Kan amma mul’ataa jirus kanarraa adda miti.
Ummanni garuu nagaa barbaada. Ummatichi kaleessa wareegama qaalii baasee dhaabota mormituu biyyatti deebise. Injifannoo dhiiga isaatiin TPLF irratti gonfate imaanaa godhee dugda ODP irratti fe’atee ”nu ceesisi” ittiin jedhe. Cehumsa kana milkeessuuf ammoo nagaan bu’uu barbaachisa. Kanaafuu ummanni nagaa barbaada malee qawwee keessaa waan buufatu tokkollee hin qabu. Kan qawwee baatee bosona taa’us ta’ee kan sana hiikkachiisuuf qawweedhaan tarkaanfii hin feesifne fudhatu balaa nutti hammeessa malee nagaa hin fidu. Cehumsicha hawwiidhaan eegamaa jiru gufachiisa, hawwii diinaa guuta malee faayidaa hin qabu. Ummanni keenyas kana tolchee beekuudhaan girgirii hattuuf karaa banaa jiru kana ofirraa dhaabsisuu qaba.
Ummani kaleessas qabsoo isaatiin jijjiirama fide. Har’as warra girgiriidhaan firii qabsoo akka diinni butatuuf goolaa jiran kamuu ofirraa dhaabsisuuf humna jabaa akka qabu agarsiisuu barbaachisa.
Lafaa fi Lafee kenyaa.Laallii shammaaran Oromo Sanyii lencaa
Galata(Addunyaa Angaasuutu dabarse)
Harki AMBOOti dheerate har’aaf hiriira gudaa qophii ji’a tokko fudhatee ture har’aaf fashalaayeera……..harki dheeratee tures gabaabateera Qeerroof qarree AMBOOn! gocha AMBOOf Naannoo ishee hin madaale jala buutanii fashaleesuu keesaniif galata qabdu otuu hin ta’iin dirqama keesan ta’uu yeroo biroofilee hubachuu qabdu! qaamoni qabsoo oromoo kolaassuuf wiirtuu qabsoo oromoo kan taate AMBOO irrati waan danda’an invest gochaa jiru sababiin isaas qaanqeen AMBOO irraa faca’u baka hunda waan ga’uuf! diinni kun lakkoofsa hin qabu Mootummaa haanga leelistoota sirna kalee murna walballeessu wixifatuu haanga Olaantumaa nama dhuunfaa mirkanneessuu kun hunduu AMBOOti guliittii dhaabatee siyaasa daldalachuu barbaada ……kanaaf AMBOO qe’ee isaa kabachiissuura darbee biyya eenyuufuu gaachana ta’aa tureef amas iti jirudha ……….. asumaan ergaan kiya biroo barataan godina biraat irra gara University AMBOOti caraan qaqabee dhaqe waan AMBOO keessati raawatamuu kamuu ijoollee AMBOOf dhiisaan ergaa kiyadha! Uummata Naanichaa waliin jireenya hawaasumaa jiraachuun ala abbumaan AMBOO baka buunee waa morminas deegaras kan jedhu waanuma hiriyoota keesan ijoollee AMBOOf Naannoo ishee waliin walii galtanii murteesitan ta’a! waan yaadamee turee garuu hafe ragaa guutuu waliin ifa gochuun nidanda’ama hagasuma garuu tokummaa keenyas miidha jenee waan amanuuf dhiifne yerootu yeroo of eeganooti!
AMBOO jiraachuuf ajandaa dhuunfaaf Qopheessuun waladda!!
Yaasoo Kabbabaa Hordofaa
Wajjira ABO wallagga lixaa Raayyaan EPRDF humnaan cabsee seenee alaabaa ABO buusee fudhatee deeme. Barcuma achi keessa jirus caccabsaniiru.
Amma ammoo qophii waajjiralee
3. Gooroo Boolee
4. Laga Xaafoo
Sakatta’insaan mankaraarsaa jiru.
Ijoolleen Gara 100 qabamaniiru
Har’aan tana bulchiinsa magaalaa Burraayyutii poolisoonni namoota ABO deeggartu jechuudhan adamsanii hidhaatii akka jiraniifi isaan keessaa ammoo qeerroon simannaa ABO irratti qooda gurguddaa qabaataa turan hedduun kiyyoo jara kanaa jala akka galan odeessi qabatamaan dhagahamaa jira.
Jarana asiin araara achiin waraana jechuun kun hin gahuu?
Rakkinni ODP ABO Wajjin Qofa Osoo Hin Taane Oromoo Wajjini
Duulli ololaa fi lola humna waraanaa ODPn ABO irratti bane kan ABO qofa irratti xiyyeeffate osoo hin taane Gaaffii Bilisummaa Saba Oromoo irratti kan xiyyeeffate dha. Yeroo ammaa ODPn magaala Finfinnee dabalatee, Oromiyaa keessatti sababa deggersa siyaasaa isa dhorkataniif qofa dargaggoota Oromoo (Qeerroo) dhibbootaan mana hidhaatti guuruu eegalee jira.
Waraanni EPRDF kan yeroo ammaa Dr. Abiy Ahmediin hoogganama jedhamu Waajjira ABO cabsee seenuudhaan qabeenya jiru kan fedhe saamee kan fedhe caccabsee balleessuu bira dabree mallattoo diddaa gabrummaa tan taate Alaabaa ABO/Oromoo fi wanneen mallattoo ABO fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo tahan hundaa caccabsee fi gubee balleessuu eegalee jira.
Ummata sodaachisuu fi shoororkeessuudhaan sagalee mormii fi gaaffii mirgaa Ummatni kaasu afaan qawweetiin ukkaamsanii of jalatti bulchuuf saamichaa fi ajjeechaa gara jabinaan guutame Oromiyaa bakka gara garaatti gaggeessaa jira. Kana bira kutanii hanga manneen jireenyaa Ummataa qabeenyaa fi lubbuu namaa waliin gubanii barbadeessuutti gahanii jiru.
Kun hundumtuu kan maddu ammoo rakkoon ODP rakkina garaagarummaa siyaasaa ABO waliin qabu qofa osoo hin taane ijaaramuma isaa irraa ODPn dantaa Saba Oromoo tiksuuf kan ijaarame tahuu dhabuu isaa irraahi. Dantaa Saba Oromoof kan hin ijaaramin tahuu bira kutee inumaa iyyuu dantaa Saba Oromoo gufachiisuuf waan ijaarameef guyyuma jalqaba miilli isaa dachii Oromiyaa irra ejjete irraa eegalee Ummata Oromoo wajjin lolaa fi rakkootti seene. Qabsoo hadhaawaa Ummatni Oromoo Waggoota 27 EPRDF irratti gaggeesseen maalummaan murna kanaa kan jijjiirame/wayyaawe fakkaatee ture. Garuu sun abdii fi hawwii bira dabree hojiidhaan lafa irratti mul’achuu danda’uun isaa hanga ammaattuu shakkii guddaa keessa jira.
Tarkaanfiin guyyaa har’a Waajjira ABO kan Magaalaa Gimbiitti dhihoo baname irratti waraanni EPRDF kan maqaa “Raayyaa Ittisa Biyyaa” jedhuun sossohu fudhate kanaaf ragaa guddaa dha. Tarkaanfii kana miidiyaa ABO kanneen akka SBO fi Gaaddisa Dhugaa, akkasumas, miidiyaalee biroo irraan hordofaa. Ummatni Oromoo haala kana sirriitti hordofee akka dhuunfata isaa harkaa ala hin baanetti fi akka injifannoon hanga ammaa wareegama qaaliidhaan argames isa harkaa hin baanee fi duubatti hin deebinetti ciminaan irratti hojjechuu qaba.
Mudde 30, 2018
የነፍጠኞች ህልም ኤርትራን ጭምር በካርታው ዱቅ አደረጓት፣ ለነገሩ የአማራ ድንበር እስከ ባፅዕ ድረስ ነው ሲሉ ነበረ እኮ የግዜ ጉዳይ ነው እንጂ ከባፅዕ እስከ አሰብ ያለው ግዛት የሚጠይቅ አስመላሽ ኮሚቴ መቋቋሙ አይቀርም። ያየው ሁሉ የኔ ነው ብሎ የማይጠግብ ማህበረሰብ!
ሰዎቹ አምረዋል ይሻላቸውል እዲህ ግልጥ ግልጥልጥ ባለነገር መጫወት ያመቻል ይሄ ወፍ ዘራሽ ስለሀገሩ ክብርና ዝናን አጉዳፊ የታሪክ አተለላ ሁሉ ጥግጥጉ እዚያው ከተከዜ ማዶ ቢመሽግ ይሻለዋል እንደሰው ትታይ ባገሩላይ ዘፈን የማይሆንለት እንደ ሸለመጥማጥ ዘላለም ምድር ለምድር ጉርጋድ እየቆፈሩ መፎከር ብርቅ የሚመስለውና ሰዋዊ ባህሪን መላበስ የማይሆንለት የዱራዊት እዝያው ከጫካው ጋር ሲቀበር ሲደበቅ ያምርበታል
Reformed OPDO and new Agazi!
Mootummaan ammaa kan keenya warri jettan kana argaa!
G/Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannat magaalaan Haaratoo kana keessa jirti!!
The ODP and Wayyaanee trained Gestapo!
The mafia group members of EPRDF and their sister organizations Who were running death and destruction in Oromia for 27 years declared again a war of genocide on Oromos in Oromia recently!
The Spearheads of these crimes are the so-called the prime minister of the rotten Ethiopian Empire and the so-called the president of Oromia region!
They are known Gestapo who leads and guide EPRDF the known mafia organization and ODP the member of EPRDF of the Oromia region respectively! They are the Wayyaanee trained known Gestapo!
Look the below pictures what they are ready to doing to Oromo people now! They are one of the ruthless fascist’s commands of the 21st century!
Kumaandoon 329 bifa addaatiin leenji’anii eebbifaman
የኢሕኣዴግ ሠራዊት በሰላማዊ ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለውን ግድያ በጥብቅ እናወግዛለን ! (የኦነግ መግለጫ – ታህሳስ 29, 2018ዓ.ም.)
Guyyaa Area Walloo Magaala Baateetti buqqa uuniifi ajjeefamuun nurraa haadhaabbatu jechuun barattoonniifi jiraattonni waliin kaleeysaafi har a hiriira geggeeysuun sagalee dhageeysifataa oolaniiru.